Lynda ANDRIATSITONTA Antsirabe, Asos	0 Commentaire juil 11, 2018
300 ny isan’ireo sarim-bavy ao Antsirabe, faritra Vakinankaratra amin’izao fotoana izao. Manao firaisana ara-nofo amin’ny lehilahy na antsoina hoe MSM izy ireo. Anisan’izany Ravaka monina ao Antsirabe. 20 taona izy amin’izao. Tovolahy izy kanefa lasa sarim-bavy. Nilaza izy fa manambady ary lehilahy ihany no vadiny saingy izy no mitana ny anjara toeran’ny vehivavy. Manao firaisana ara-nofo avy any ao aoriana (sodomie) izy ireo. Araka ny fitantarany dia efa hatramin’izy mbola kely no nanana toetra vehivavy. “Notaizain’ny ray aman-dreniko tahaka ny vehivavy aho satria lahy avokoa ny zokiko miisa roa. Raha bevohoka ahy ny mamako ka nanao “échographie” dia vavy no hita tao. Kanjo rehefa teraka dia lahy ihany”, hoy Ravaka.
Araka ny fanazavan’ny dokotera Jean Claude Rakotomalala, tale mpananteteraka ny fikambanana ASOS (Action Socio-Sanitaire Oragnisation Secours) dia avy alalan’ny fanaovana firaisana ara-nofo tsy voaaro anisan’izany fanaovana “sodomie”, ny fampiasa fitaovana maranitra tsy voadio…ny fifindran’ny aretina VIH/SIDA. Fikambanana miantsehatra amin’ny fanantenana ireo mpampanofa tena, sarim-bavy sy sarin-dahy hampiasa fiarovana rehefa hanao firaisana ara-nofo ny ASOS. Manao fitiliana maimaim-poana momba ny SIDA ihany koa ny fikambanana. Ankoatr’ireo olona 21 dia niampy dimy indray ny olona voan’ny SIDA ao Antsirabe. Lasa faritra mena ao Antsribe amin’ity aretina ity.
‹ DATIM-PIFIDIANANA: « Tsy mihemotra izany »	› ADY AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO: Mandray anjara ny bibikely